နှစ်ဆတိုး – Grab Love Story
မနေ့ညက တစ်ညလုံးလိုလို ဖောင်စီးလက်ဖွဲ့ကိစ္စ ပြီးမြောက်ရေးအတွက် မကြည်ရှိန်နှင့် ကာမဆက်ဆံခြင်းအလုပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မိုးလင်းခါနီးမှ ကိစ္စပြတ်တော့သည်။ နံနက်(၄)နာရီ ခွဲပြီး လမ်းမှာတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်။ ည(၁၁)နာရီ ကျ တွေ့ကြမည့်အကြောင်း ။ မကြည်ရှိန်ကလည်း သူ့ယောက်ျားကို အရက်မူးအောင် တိုက်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မနေ့ညကလို အားရပါးရ နှစ်ပါးသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း … စသည်ဖြင့် စုံစိနေပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက လမ်းခွဲခါနီးတွင် လူနှစ်ယောက်ဖက်စာ မန်ကျည်းပင်ကြီးကို ကွယ်၍ မကြည်ရှိန်ကို ဖက်နမ်းသည်။ ပြီးတော့ ပေါင်ကြားက စောက်ဖုတ်ကြီးကိုလည်း ထမီလှန်၍ ကုတ်ထည့်လိုက်သေးသည်။ မကြည်ရှိန်ကလည်း အားကျမခံ ထွန်းထွန်းပေါင်ကြားက လီးတန်ကြီးကို ပုဆိုးပင့်လှန်၍ ဆွဲညှစ်လိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးက ငိုက်ဆင်းနေသော်လည်း ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း နွေးနွေးတောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေသည်။ နှစ်ယောက်သား (၅)မိနစ်လောက် အချစ်ပလူးပြီးနောက် လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်။ မကြည်ရှိန်ကလည်း သူ့ယောက်ျားရှိရာ ဖဲဝိုင်းသို့ လာလမ်းအတိုင်းဣဒြေ္နမပျက် ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းကမူ ရွာလမ်းအတိုင်း အနောက်ဖက်သို့ ထွက်လာခဲ့ပြီး စာသင်ကျောင်း ကိုပတ်ခါ တောင်ဘက်မှ ပတ်ဝင်ခဲ့ပြီး ဗီဒီယို ဝင်ကြည့်နေ၏။ မကြည်ရှိန်က ကာမပါရမီ ဖြည့်သဖြင့် လက်ဖွဲ့အစီအစဉ် အောင်မြင်ခဲ့သည်မို့ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေပါတော့သည်။
ထို့နောက် သူကိုယ်တိုင် ဖော်စပ်ထားသော ကာမအားတိုးဆေးကို စားသည်။ ထိုဆေးကို စားပြီး တစ်ရေးကောင်းကောင်း အိပ်လိုက်လျှင် ကာမအားတွေ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးတိုးပွားလာသည်။ ကာမဆေးစားပြီးသောအခါ မုံညင်းဆီ၊ ခွေးလှေးယားမြစ်၊ နှမ်းလုံးကြိုင်မြစ်၊ ဘူးသီးအနှစ်တို့ဖြင့် ဖော်စပ်ထားသော လိမ်းဆေးဆီဖြင့် သူ့လီးတန်ကြီးကို ကျကျနန ပွတ်လိမ်းဆုတ်နယ်နေပြီး တစ်ချိုးတည်း အိပ်လိုက်ပါတော့သည်။ မကြည်ရှိန်တို့လင်မယားလည်း စတုဒီသာ အဝအပြဲ စားသောက်ပြီး ဖဲဝိုင်းက နိုင်လာသော ငွေများကို လွယ်အိတ်နှင့် ထည့်ကာ အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး အူမြူးနေကြ၏။ ကိုပေါစိန်က သူ့မိန်းမကို ကြက်ဥနှစ်လုံးယူခဲ့ပြီး အိမ်ပေါ်ထပ် တက်ခဲ့ဖို့မှာရင်း ရွှေလိမ္မော် (၂) ပုလင်းယူကာ အပေါ်ထပ် တက်လေသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ စားပွဲပေါ်တွင် ရွှေလိမ္မော်နှစ်လုံးကို တင်လိုက်သည်။ ယောက်ျားပတ် လက်ပတ်နာရီ အကောင်းစားတစ်လုံး စားပွဲပေါ်တွင် ရောက်နေ၏။ ကိုပေါစိန် အံ့သြသွားသည်။ “..တောက်….ကောင်မ ညက အိမ်သာဆိုပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ ပြန်မလာတော့ဘူး..၊ သူ ပိုက်ဆံလာပေးတော့ အတော်ခေါ်ယူရတယ်၊ ဘယ်ကောင်နဲ့များ နောက်မီးလင်းနေမှန်း မသိဘူး…” ဟု ရင်တွင်းမှာလည်း သံသယတွေနဲ့ ဗလောင်ဆူလာသည်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မကြည်ရှိန်ကို သူ့အရင်ယောက်ျားလက်ထဲက ကလီကမာနှင့် လုယူခဲ့ရသည်မို့ (၃)ကျောင်းပြောင်းသော ရှင်၊ (၃)လင်ပြောင်းသော မိန်းမသည် ကလီကမာ ဥာဏ်နီ၊ဥာဏ်နက် များတတ်ကြောင်း လောကနီတိထဲမှာ ငယ်စဉ်က သင်ယူခဲ့ဖူး၏။ တောက်…ဖေလိုးမ…မသာမတော့ သိကြရောပေါ့ကွာ..ဟင်း…၊ ထိုစဉ် မကြည်ရှိန်က ကြက်ဥနှစ်လုံးကိုင်၍ အခန်းထဲဝင်လာသည်။ ကိုပေါစိန်က မကြည်ရှိန်ကို မီးဝင်းဝင်းတောက်သော မျက်လုံးတို့ဖြင့် စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်ကာ… “ ဟေ့ကောင်မ…ငါ့ကို လုံးဝမညာနဲ့… ဒါ ဘယ်က လင်ငယ့်ပစ္စည်းလဲ..အမှန်အတိုင်း ပြောစမ်း…၊ မနေ့ညက အိမ်သာဆိုပြီးတော့ လင်ငယ်နဲ့ နောက်မီးလင်းနေတာပေါ့.. ဟုတ်လား…” မကြည်ရှိန်က နာရီကို ဆတ်ခနဲ လှမ်းယူလိုက်ရင်း … “ ဒီမှာ …ကိုပေါစိန်… ကျုပ် ဘာကောင်မလဲ ဆိုတာ တော်သိတယ်..နော်…၊ ဘဝကံမကောင်းခဲ့လို့ လင်တွေထည်လဲ ပြောင်းခဲ့ပေမယ့် တော်နဲ့ညားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကျုပ် ဘယ်တုန်းက ဖောက်ပြန်ဘူးလို့လဲ…၊ ဘာမှ မမေးမမြန်းဘဲနဲ့ ကိုယ်ထင်ရာတွေ စွပ်ပြောမနေနဲ့…” “ ဟာ..ဘာမေးမြန်းနေစရာ လိုသလဲကွ.. ဒီအခန်းထဲမှာ ယောက်ျားပတ်နာရီကြီး ရောက်နေတာ နင်လင်ငယ်နဲ့ နောက်ဇာတ်ခင်း နောက်မီးလင်းနေတာ ထင်ရှားနေတာပဲ..၊ အဲလိုဆို ပြောလေကွာ..၊ ဒီနာရီက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအခန်းထဲ ရောက်နေတာလဲ…”“ တောက်….ဟာ….ပြောလေ..ဒီနာရီက ဘယ်လိုလုပ်…….” “ ပံ့သကူ ကောက်ရတာ တော်ရေ……” “ ဟင်…ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ…” “ မနေ့ညက အိမ်ပြန်လာရင်း ရခဲ့တာ…” မကြည်ရှိန်က မာကျောကျွတ်ဆတ်သော အသံဖြင့် ပြော၏။ ထို့နောက် ဆက်ပြောပြန်သည်။ “ အိမ်မရောက်ခင်.. သေးပေါက်ချင်လို့ မအောင့်နိုင်တာနဲ့ ခင်မြင့်နွယ်တို့ ခြံစည်းရိုးနား သေးထိုင်ပေါက်နေတာ…၊ မျက်စိရှေ့မှာ လရောင်ဟပ်ပြီး ဝင်းဝင်းလက်လက် ပစ္စည်းလေးမို့ ကောက်ကြည့်လိုက်တာ.. အဲဒီ နာရီဖြစ်နေတာပဲ..” ဒီတော့မှ ထွန်းထွန်း ပံ့သကူ ပစ်ထားသော နာရီမှန်း သဘောပေါက်လိုက်သည်။
ခင်မြင့်နွယ်ဆိုတာ … တစ်ရွာလုံး၇ှိ အပျိုချော(၁၀)ဦးတွင် နံပါတ် (၁) စာရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ မိဘကလည်း ပိုက်ဆံရှိသည်။ ဧကန္တ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ခင်မြင့်နွယ်ကို ပိုးချင်လို့ ခြံနားလာပစ်ထားပုံ ရသည်။ အခုမှ ကိုပေါစိန် စိတ်ထဲက အလုံးကြီး ကျသွားတော့၏။ သို့သော် နည်းနည်းပါးပါး ထပ်တွန့်လိုက်သေး၏။ “ ပံ့သကူ ရထားမှန်း ဘာလို့ညက ငါ့ မပြောတာလဲ..” မကြည်ရှိန်က မျက်စောင်းထိုးရင်း…. “ စောက်မြင်ကပ်လို့… မပြောတာ…” ဟုတ်သား…သူ့မိန်းမ သူ့ကို မကျေနပ်မှန်း ညထဲက သိသည်။ လီးအစာ စားချင်နေတာ သူမကျွေးနိုင်ခဲ့။ ဖဲဇောတွေ ကပ်နေခဲ့သည်။ မိန်းမထက် ဖဲကိုချစ်ကြောင်း စကားနာထိုးခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် မိန်းမကျေနပ်အောင် စောက်ဖုတ်ကိုတောင် ယက်ပေးခဲ့ရသေးသည်။ “ လာပါ…မိန်းမရာ… ငါမှားပါတယ်…” မကြည်ရှိန်က မသွားဘဲ ပေရပ်နေသည်။ ထိုသို့ ပေကပ်နေလေ ကိုပေါစိန်စိတ်တွေက ပို၍ထကြွလာလေဖြစ်သည်။ “ လာပါ…မိန်းမရ… ညက အကြွေးကို အတိုးနဲ့ ဆပ်ပါ့မယ်..၊ ” ကိုပေါစိန်တစ်ယောက် ကာမရာဂ သွေးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ငယ်မူပြန်ကာ မြူးကြွနေသည်။ မကြည်ရှိန်ကလည်း ရပ်မြဲရပ်နေသည်။ ညက သူ့ကို အားရပါးရ လိုးပေးသွားသော ထွန်းထွန်း၏ဧရာမလီးကြီးကို မြင်ယောင်မိရင်း မျက်နှာမှာ သွေးရောင်လွှမ်းလာသည်။ အမှန်အားဖြင့် သူ့ယောက်ျား ပို၍မရိုးမရွဖြစ်လာအောင် တမင်သက်သက် ဆွနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အရက်ဒဏ်နှင့် တစ်ချိုးထဲ အိပ်ပျော်သွားမည်..၊ သည်တော့မှ သူတို့နှစ်ယောက် ထင်တိုင်းကျဲ လို့ရမည် မဟုတ်ပါလား..။ “ လာပါဆိုကွာ… မိန်းမကလဲ…” “ သွား….မလာဘူး…၊ အခုမှ လာချော့မနေနဲ့….ဟွန်း…” မကြည်ရှိန်က ကိုပေါစိန်နား ကပ်မလာဘဲ အခန်းထောင့်ရှိ ဘီရိုနားသွားပြီး အဝတ်အစားလဲလိုက်သည်။ ညက ဝတ်ထားခဲ့သော ထမီကို အရင်လဲ၏။ ထို့နောက် ကျောပေးလျှက် အနေအထားဖြင့် အပေါ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အတွင်းခံဘော်လီကို လက်နောက်ပစ်၍ချွတ်သည်။ ထမီ ရင်မရှားဘဲ ကိုယ်အထက်ပိုင်းကို သည်အတိုင်း ဖော်ပြထား၏။ ဖွံ့ဖြိုးစွင့်ကားသော ဖင်သားဆိုင် ထွားထွားကားကားကြီးနှင့် ကျောပြင်ဖွေးဖွေးနုနုကြီးကို ကြည့်ကာ ကိုပေါစိန် စိတ်တွေ ပို၍ပို၍ ထကြွလာ၏။ ငနဲက ငါးခူပြုံး ပြုံးကာ ကြက်ဥတစ်လုံးကို အစိမ်းလိုက် ဖောက်သောက်လိုက်ပြီး ရွှေလိမ္မော်ပုလင်းကို ပါးစပ်ဖြင့် တေ့ကာ မော့ချလိုက်သည်။ ပြီးတော့ .. နောက်တစ်ချီ ထပ်မော့ပြန်၏။ ပုဆိုးအင်္ကျီများ ချွတ်၍ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြင့် သူ့ကို ကျောပေးကာ လျှော်ပြီးသား အတွင်းခံ အင်္ကျီဝတ်နေသော မကြည်ရှိန်ထံ သွားသည်။ ခြေသံကြားသော်လည်း မကြည်ရှိန်က လုံးဝလှည့်မကြည့်..။
ကိုပေါစိန်က အတွင်းခံအင်္ကျီ နောက်ပြန်ဝတ်နေသော မကြည်ရှိန်လက်ကို ဆွဲဖယ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာကို ချွတ်ယူလိုက်ကာ ကုတင်ဖက်ဆီလွှင့်ပစ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် နုထွတ်ဝင်းမွတ်နေသော နို့အုံပြည့်ပြည့်တင်းတင်းကြီးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆုတ်ချေပေးလိုက်သည်။ “ ဖယ်စမ်းပါ…. အခုမှ….” မကြည်ရှိန်က ထမီကို လှမ်းဆွဲသော်လည်း မမီတော့..။ ထမီက ကြမ်းပြင်ပေါ် ကွင်းလုံးကျွတ်ကျသွား၏။ သူ့ပေါင်ကြားက လီးကြီးမှာလည်း ထောင်မတ်စ ပြုလာသည်။ ထွန်းထွန်းလောက်တော့ မကြီး..၊ ကိုပေါစိန်က တဏှာရာဂ အားကြီးလှသော်လည်း လီးတန်ကတော့ အရှည် ၅ လက်မခွဲသာ ..လူစင်မှီရုံမျှသာ ရှိ၏။ အတုတ်က ၄ လက်မခွဲခန့်ရှိ၏။ လီးတန်ကြီး အရောင်အဆင်းက ညိုမဲမဲ အရောင်ဖြစ်ပြီး .. ဒစ်ကြီးက လန်ပြဲနေသည်။ အသက်အ၇ွယ်ကလည်း စကားပြောလာပြီမို့.. လီးတန်ကြီးကို ကြည့်ရသည်မှာ မွဲခြောက်ခြောက် နိုင်လှသည်။ ထွန်းထွန်းလီးနှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် ကိုပေါစိန်လီးမှာ သားအရွယ်မျှသာ ရှိတော့သည်။ တဖြေးဖြေး စိတ်ပါ စိတ်ထလာဟန်ဖြင့် လီးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်လျက် ခပ်သွက်သွက် ဂွင်းတိုက်ပေးသည်။ ကိုပေါစိန်က လရေထွက်မြန်၏။ ဂွင်း ခပ်ပြင်းပြင်း တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် စောက်ဖုတ်ထဲ လိုးသောအခါ လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်ရုံနှင့် လရေထွက်တော့မည်ကို သိထားသည်။ နောက်တစ်ချီ လုပ်ခိုင်းမည်..၊ ပြီးတော့ ထလာအောင် ဂွင်းတိုက်ပေးမည်..၊ မကြာခင် သုတ်ရေတွေ ထွက်စေမည်..။ ဤသို့ဖြင့် ကိုပေါစိန်၏ အားအင်ဗလတွေကို ချိနဲ့သွားစေမည်။ သို့မှသာ အရက်ရှိန်ဖြင့် ကုလားသေကုလားမော အိပ်ပျော်သွားမည်။ မကြည်ရှိန် သတ်ကွင်းထဲကို ကိုပေါစိန် တည့်တည့်ကြီး ဝင်လာပါတော့သည်။ သို့သော် မကြည်ရှိန် ထင်ထားသလို တော့ မဟုတ်..။ ထကြွလာသော ကာမစိတ်ကို ရွှေလိမ္မော်ပင့်မြှောက်လိုက်သည့်အတွက် ကိုပေါစိန် ရာဂဘီလူး ဝင်ပူးတာ ခံရပါတော့သည်။ မကြည်ရှိန်ကို ခုတင်ပေါ်သို့ ပွေ့တင်လိုက်ပြီး ခုတင်စောင်းတွင် ထိုင်စေသည်။ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို တွဲလောင်းချထားပြီး ဘေးသို့ ကားထားလိုက်သည်။ ကိုပေါစိန် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး ဖောင်းဖုတင်းမောက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို အသေအချာ ကြည့်လိုက်သည်။ အရက်အရှိန်ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြီး ကြည့်ရသည်ကိုက မြူးထူး ပျော်ရွှင်စရာကြီး ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ကိုပေါစိန်က အညိုရောင်သမ်းနေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို လက်နှင့်ဖြဲလိုက်သည်။ ထိုအခါ နီရဲရွှဲစိုသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေက ပြူးတစ်ထွက်လာ၏။ စောက်ရည်ကြည်တို့ဖြင့် တောက်ပနေသည်။ ကိုပေါစိန်က သူ့မျက်နှာကို စောက်ဖုတ်ကြီးအနားသို့ တိုးကပ်ပြီး လျှာဖျားဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်လေသည်။ စောစောက ဟန်တစ်လုံးပန်တစ်လုံးဖြင့် ခါးမတ်ထားသော မကြည်ရှိန်တစ်ယောက် ကြမ်းရှပူနွေးသော လျှာအတွေ့ကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းတက်သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်သို့ထောက်လျှက်ရင်မော့ခါးကော့လျှက် ခံပေးလိုက်သည်။ စောစောကမူ .. မကြည်ရှိန် အမှန်တကယ် ဖီးမတက်သေး..။ ထွန်းထွန်းလီးအတွေ့က အကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးနေသဖြင့် ညရေးညတာအတွက် စီမံစိတ်ကူးလျက် အေးစက်စက်သာ ရှိနေခဲ့သည်။
ကြမ်းရှသော လျှာဖျားနွေးနွေးကြီးက စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေကို ပွတ်ဆွဲမွှေဆွ ယက်ပေးလိုက်သောအခါ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ကာမအကြောမှန်သမျှကို ပုတ်ခတ်လှုပ်နှိုးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်။ မကြည်ရှိန် မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း တီကောင်ဆားနှင့်အတို့ခံရသလို တွန့်လိမ်ကော့ပျံနေသည်။ “ ပျစ်…ဗြစ်…ဘွတ်…ဘွတ်…ပလပ်….ပလပ်….ပြတ်……..” ” အား…အား…ရှီး…ကျွတ်..အာ…ာအး…. ကျွတ်…ကျွတ်….အား…အာ့…ကျွတ်….” မကြည်ရှိန် တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်လူးခါလျှက် အသည်းအသန် ညည်းညူနေပါတော့သည်။ နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာလည်း တင်းကားနေသည်။ စောက်ခေါင်းဝပတ်လည်ရှိ အတွင်းသားနုနုတွေကို ရှလူးခနဲ စုပ်ယူထည့်လိုက်သည်။ “ အမလေး….အား…..အမလေး..လေး… အား ရှီး….အမေ့..အီးဟီး… အမေရေ…ကျွတ်…. ကျွတ်… ကောင်း…ကောင်းလိုက်တာ… တအားပဲ…အင်း..ဟင်း..” ကိုပေါစိန်က စောက်ဖုတ်ကြီး အလည်လောက်တွင် ဖြဲထားသော သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်း ထိပ်နားဆီသို့ ပို့လိုက်ပြီး အသေအချာ ဖြဲကြည့်လိုက်သည်။ ထိုအခါ … နီညိုရောင်သန်းနေသော စောက်စိငုတ်ကြီးက ပြူတင်းထွက်လာသည်။ ထို ပြူတင်းထွက်လာသော စောက်စိကြီးကို ကိုပေါစိန်က လျှာဖျားထိပ်ဖြင့် တို့ထိကလိလိုက်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ အကြောမှန်သမျှလည်း တဖြိုးဖြိုး တဖျင်းဖျင်း နှင့် လှုပ်ခတ်သွားသည်။ ကိုပေါစိန်က စောက်စိညိုပြူးပြူးကြီးကို ချိုချဉ်စုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်ဖြင့် စုတ်ပေးလိုက်ရာ ..မကြည်ရှိန်တစ်ကိုယ်လုံး ငါးရံ့ပြာလူးသကဲ့သို့ ဆတ်စလူးခါသွားလေတော့သည်။ နှုတ်ကလည်း တအီးအီး တအင်းအင်းဖြင့် ညည်းညူလျက် ခေါင်းကိုနောက်လှန်မော့ပြီး ပါးစပ်ကြီး ဟထား၏။ နို့အုံမို့မို့ကြီး နှစ်မွှာမှာလည်း ဖားဖိုထိုးသလို နိမ့်ချီမြင့်ချီ လှုပ်ရှားနေသည်။ ဤအခြေအနေရောက်လျှင် သူ့မိန်းမ ပြီးတော့မည်ကို ကိုပေါစိန်က သိနေ၏။ ထို့ကြောင့် ကာမမိန်းခလုပ်သဖွယ်ဖြစ်နေသော စောက်စိငုတ်ပြူးပြူးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုတ်၊ လျှာဖြင့်လည်း တဆတ်ဆတ် လှုပ်ဆွပေးလျက် ရှိသည်။ “ ပြွတ်….ပြွတ်…ပလပ်…ပလတ်…. ဖွတ်…ပြလစ်… ပြွတ်…ပြွတ်… ရှလွတ်….ဖွတ်…ဖွတ်..စွပ်…စွက်.. အီးဟီး…အီး အီး…အင့်… အ…..ကျွတ်… အမလေး.. အီးဟူး…. ဟင့် အင်… အ…… အမေ့…အမလေး…ဟီးဟီး…. ပီး…ပြီးတော့မယ်… ..ဟင်း ဟင်း….ဟင်း…. .လုပ်…….လုပ်တော့… အား..ရှီး……အား……” မကြည်ရှိန်တစ်ယောက် ကုတင်ပေါ် လှန်ကျသွားသည်။ ကိုပေါစိန် လီးတန်မဲမဲကြီးမှာလည်း အကြောတွေအပြိုင်းပြိုင်း ထကာ မာကျောသထက် မာကျောလာသည်။ ကိုပေါစိန် မတ်တတ်ထရပ်လိုက်ပြီး မကြည်ရှိန်၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဖြဲကာ ရင်ဘတ်ဆီ တွန်းဖိလိုက်သည်။
ထို့နောက် သူ့လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီးဖြင့် စောက်စိကြီးကို ပွတ်ထိုးလိုက်သည်။ “ အား…အာ…အမေ့…အား….အမလေး…ကျွတ်…. ရှီး အီး…အား..ကျွတ်…အား…….” မကြည်ရှိန် စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ပွင့်ကန်ပေါက်ကွဲထွက်တော့မတတ် ယားကြွလှိုက်တက်လာပါသည်။ ကိုပေါစိန်က လီးတန်ကြီးကို လက်နှင့် အသေအချာကိုင်၍ စောက်စိကြီးကို ဖိထိုးလိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို အောက်သို့ ဖိနှိပ်ချလိုက်သည်။ “ ဖွတ်….ဖွတ်..ပလွတ်…..ပလွတ်……” လီးတန်ကြီးက အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးထဲ နစ်ဝင်သွားတော့သည်။ ခါတိုင်းထက် အနည်းငယ်ချောင်ချိချိ ဖြစ်နေသည်ကို ကိုပေါစိန် သတိထားမိ၏။ သို့သော် ဘာမျှ မေးမြန်းမနေတော့..။ အိမ်ဝိုင်းထဲမှာ ခရမ်းပင် ၁၀ ပင်ခန့်ရှိသည်။ အမြဲတန်း အသီးသီးနေသည်။ ယခင်ကလည်း သူလိုးတာ အားမရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလိုးခံချင်ပါလျက် မလိုးဖြစ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ ခရမ်းသီးနှင့် အာသာဖြေနေကျ ဖြစ်၏။ ယခုလည်း မနေ့ညက ခရမ်းသီးနှင့် အာသာဖြေထားပုံရသည်။ “ ဗွတ်….ဖွတ်…ပြွတ်….ပလွတ်….ဖွတ်….စွပ်…ဖွတ်…အ…အ….ဟင့်.. အင့်…အမေ့…အမလေး….အား…အား……..” မကြည်ရှိန်နှုတ်ဖျားမှလည်း တအင့်အင့် အသံတွေ ထွက်ရင်း သူ့ဖင်ဆုံကြီးကို ကော့ကော့ပြီး ခံသည်။ ထွန်းထွန်းလီးကြီးကို ခံထားရသော စောက်ဖုတ်မို့ အားရပါးရတော့ မရှိလှ..။ သို့သော် စောက်ဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကြီး အယက်ခံထားရသည့်အတွက် ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေရကား ကျေနပ်ဖွယ်ရာတော့ ရှိလှသည်။ အချက် နှစ်ဆယ်လောက် ခပ်ပြင်းပြင်း ဆောင့်အပြီးတွင် ကိုပေါစိန် လရေတွေ ပန်းထွက်ကုန်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ပင်ပန်းမောဟိုက်ကာ မကြည်ရှိန်ကိုယ်လုံးပေါ် မှောက်ကျသွားသည်။ မကြည်ရှိန်ကလည်း ကာမဆန္ဒ အထွတ်အထိပ်ရောက်၍ စောက်ရည်ပူတွေ ပန်းထွက်ကာ ပြီးဆုံးသွားသည်။ နှစ်ယောက်သား အတန်ကြာစွာ မှိန်းနေကြရာမှ ကိုယ်ချင်းခွာလိုက်ကြပြီး ခုတင်ပေါ်တွင် တူနှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲလျက် အိပ်လိုက်ကြရာ မကြာခင် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားကြလေတော့သည်..။ “ သား…လေး…သားလေး…ထတော့လေ.. ..” နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ကောင်းနေစဉ် သူ့အမေက လှုပ်နှိုးလိုက်သည့်အတွက် ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် နိုးလာသည်။ “ ဘာ…..ဘာဖြစ်လို့လဲ…မေမေ….” “ အောက်မှာ တင်ရီမ ရောက်နေတယ်… အထည်တွေ ညတွင်းချင်း ပို့ရမယ်လို့ လူကြုံနဲ့မှာလိုက်လို့… ကနေ့ည (၁၁)နာရီ ရထားအမှီ ရွာထောင်ဘူတာက စောင့်ပြီး တင်ပေးရမှာတဲ့… သူ့မောင်က ညက အရက်မူးလွန်းပြီး အရက်နာကျနေလို့ မင်းလိုက်ပို့ပေးဖို့ အပူကပ်နေတယ်…” “ ဟာ….ဒုက္ခပါဘဲ..ဗျာ…” တစ်ခါတစ်ရံ မတင်ရီမ၏ အာရုံကို စိတ်နှင့်မှန်း၍ သူ့ပေါင်ကြားက မော်တာကို အာသာပြေ ဆော့ကစားဖူးသည်။ ညနေဆွမ်းချိုင့် သွားပို့လျှင်လည်း သူစားချင်တာကို လူတွေမသိအောင် ခိုးခိုးကျွေး၇ုံမျှမက ပိုယူလာတတ်သေး၏။ မတင်ရီမက စက်ချုပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်။ တစ်ရွာလုံး သူတစ်ဦးထဲသာ ရှိသဖြင့် လက်မလည်အောင် ချုပ်ရသည်။ ပညာသင် အကူခဖြင့် ၁၄နှစ် ၁၅နှစ်ဝန်းကျင် ကောင်မလေး ၅ ယောက်ခန့် ရှိသည်။ သူမ၏လုံးကြီးပေါက်လှ ရုပ်ရည်ဖြင့် ယောက်ျားမယူသည်ကို ထွန်းထွန်းလည်း စိတ်ဝင်စားလျှက်ရှိလေသည်။ အပျိုကြီးရော အစစ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟု တစ်ခါတစ်ခါ သံသယဖြစ်မိသည်။ ရွာမှာသာ ခပ်တည်တည်နှင့် အပျိုကြီးဟန်ဆောင်ပြီး မြို့တက်ပြီး ကုန်းနေလျှင် ဘယ်သူသိနိုင်တာမှတ်လို့..။ စက်ချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မို့ မြို့နှင့်ကင်းကွာသူ မဟုတ်..။ ကင်းကွာလို့လည်း မရ..။ သည်ပညာကိုပင် မြို့က သင်ယူခဲ့ရသည် မဟုတ်လား..။ ထို့ကြောင့် မျက်စိကြီးနားကြီး ခေတ်မီသူဟု ဆိုရသည်။ ပြီးတော့ သြဇာထက်မြက်သော အပျိုခေါင်း..။ ရွာမှာ နာရေး၊ သာရေး၊ ရှိလျှင် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိ၏။ ဒီအသက်အရွယ်နှင့် စာဖတ်ဝါသနာပါသူဟူ၍ တစ်ရွာလုံးတွင် မတင်ရီမတစ်ယောက်သာ ရှိပုံရ၏။
ထွန်းထွန်းက ဘာစကားမှ မတုံ့ပြန်ဘဲ ငူငူငိုင်ငိုင်ကြီး ထိုင်နေသဖြင့် သူ့အမေက… “ဟဲ့….ထတော့လေ… မျက်နှာသစ် ရေချိုးပြီးတော့ လိုက်ပို့လိုက်..ကြားလား…၊ တင်ရီမကိုလဲ နှုတ်ဆက်လိုက်အုံး…၊ ကဲပါ… လာလာ အခုလိုက်ခဲ့…” ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် သူ့အမေနောက်က မှုန်ကုတ်ကုတ်ဖြင့် လိုက်လာသည်။ ည ၁၁ နာရီ မကြည်ရှိန်နှင့် ချိန်းထားသော ကိစ္စသာ မရှိခဲ့လျှင် ထွန်းထွန်း ကျေကျေနပ်နပ် လိုက်ပို့ပေးမည်။ အခုတော့ ကာမဓါတ်စာကို အဟန့်ခံလိုက်၇သဖြင့် ကျွဲမြီးတိုနေသည်။ ကိုရင်လူထွက်ပြီးကတည်းက မတင်ရီမနှင့် မတွေ့ရသည်မှာ ဒီနေ့အထိဖြစ်၏။ ကိုရင်ဘဝက စားအိမ်သောက်အိမ်၊ သူ့ကိုယ်၌ကလည်း မတင်ရီမကို တကယ့်ကို နှစ်နှစ်ကာကာ ခင်ပါသည်။ ခင်မင်ရုံမျှမက မတင်ရီမ၏ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် လုံးကြီးပေါက်လှ ရုပ်ရည်ကိုပင် လူပျိုသွေးလေးဝင်လာတော့ စိတ်ဝင်တစား တပ်မက်ခဲ့ဖူးသည်။ မတင်ရီမ ရုပ်ပုံလွှာကို စိတ်ထဲကမှန်း၍ စိတ်ကူးယဉ် ဖောက်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ ခက်နေသည်က မကြည်ရှိန်ပေါ် စွဲလန်းစိတ်..။ ပထမဆုံး လိုးခဲ့ဖူးသည့်စောက်ဖုတ်မို့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအထိပါ စွဲနေပုံရသည်။ ပြီးတော့ မနေ့ညကမို့ ဖြစ်ရပ်က ပူပူနွေးနွေးကြီး ရှိသေး၏။ “ ထွန်း…. နေနိုင်လှတဲ့ ငါးပိချက်..၊ လူထွက်ပြီးကထဲက မတွေ့၇တာ၊ ..အိမ်တောင် လာဖော်မရဘူး..၊ ဘာလဲ..ထမင်းခိုးစားရတဲ့ဒုက္ခ လွတ်သွားလို့ နင်က ပုန်ကန်တာပေါ့ လေ….ဟုတ်လား…” “မဟုတ်ပါဘူး…မမရဲ့… ကျောင်းက ခဏယူလာတဲ့ ရှေးဟောင်းစာပေထဲက ဆေးနည်းနဲ့ ဗေဒင်ပညာ မန္တာန်လက်ဖွဲ့ စီရင်ခန်းတွေ ကူးနေရလို့ပါ….” ထွန်းထွန်းအမေ မကြည်ကြည်က သူတို့နှစ်ယောက် အချီအချ ပြောနေကြသည်ကို ပြုံးပြုံးကြီး ကြည့်ရင်း သဘောကျကျေနပ်နေ၏။ “ အခု…လေးနာရီ ထိုးပြီးဆိုတော့ ငါးမတ်တင်းလောက် သွားမယ်လေ…မမ..” “ အေးအေး…ကဲ..သားကလဲ ရေချိုးတော့…ထမင်းစားပြီး လိုက်ပို့လိုက်တော့…” “ ထမင်းလဲ အိမ်ကျမှစား မောင်လေးကြိုက်တဲ့ အမဲသားနှပ်နဲ့ ပဲကုလားဟင်း ချက်ထားတယ်…” ကိုရင်ဘဝထဲက သူစားချင်တာ ချက်ခိုင်းနေကျမို့ မတင်ရီမက သိနေသည်။ “ ကဲ…ရေချိုးပြီး လာခဲ့တော့နော်… မင်းအတွက် အင်္ကျီသုံးထည်လဲ ချုပ်ထားတယ်၊ တန်ဆောင်တိုင်လက်ဆောင်ပေါ့..၊ ကဲကဲ..မမကြည် ကျမ သွားတော့မယ် ရေချိုးပြီးရင်သာ ဒီငါးပိချက်ကို လွှတ်လိုက်တော့…” နာရီက အဖိုးတန်သည့်တိုင် လုံးဝမနှမြောပါ..။ သည်နာရီမျိုး အလုံးပေါင်းများစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အဓိကပြဿနာက မကြည်ရှိန်တို့ လင်မယားအခန်းထဲမှာ နာရီမေ့ထားခဲ့တဲ့ ကိစ္စပါ..။ လူမှုအတွေ့အကြုံ နည်းပါးသေးသည့် ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အသဲအသန် ကြောက်နေမိသည်။ သူများ မယားကြာခိုတဲ့ ကြာကူလီအကောင်ဟု လူသိထင်ရှား ဖြစ်သွားမှာ သေမတတ် ကြောက်၏။ စောစောကထဲက မတင်ရီမနှင့် လက်ဖွဲ့ကိစ္စ စီရင်ခွင့်ရလျှင် ဘာပြဿနာမှ ဖြစ်မည်မဟုတ်..။ မတင်ရီမက ငြင်းခဲ့လျင်လည်း ဤကိစ္စမှ ဖြစ်မြောက်အောင် မလုပ်ရလျှင်လည်း အဆိပ်သောက်ပြီး သေပစ်မယ်ဟု ချောက်လျှင် ရကိုရမည်..။ အခုတော့ လွန်ကုန်ပြီ..။ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် လှည်းမောင်းထွက်လာခဲ့သည်။ မကြည်ရှိန်တို့အိမ်နားအရောက်တွင် သူ့ယောက်ျား ကိုပေါစိန်က အားရဝမ်းသာစွာဖြင့် .. “ ဟကောင်ကြီး … ဘယ်လဲဟ… မောင်ရင်ဖွက်ထားတဲ့ နာရီ ပံ့သကူက မောင်ရင့်အစ်မ မကြည်ရှိန် ရလာသဟေ့..၊ ကြံကြံဖန်ဖန် ကွာ.. ခင်မြင့်နွယ်တို့အိမ်နား သွားဖွက်ရတယ်လို့….၊ ဟား..ဟား…. အခုတော့ ရစေချင်တာက တစ်ယောက် ရတာက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီ…” “ ဒါနဲ့….မင်းက ဘယ်လဲ….” ထိုစဉ် မကြည်ရှိန်တစ်ယောက် ထဘီတိုတို ဝတ်ကာ ရင်ရှားကြီးဖြင့် ထွက်လာ၏။ ည ၁၁ နာရီ နော်ဟူသော အသိပေးသော အကြည့်များဖြင့် ထွန်းထွန်းကို ကြည့်နေသည်။
ထွန်းထွန်းကလည်း မနေ့ညက သူအားရပါးရလိုးထားခဲ့သော ပေါင်ကြားရှိ စောက်ဖုတ်ကြီးဆီ မှန်းကြည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ခြေသလုံးသား ဝင်းဝင်းတုတ်တုတ်ကြီးတွေဆီ…ပြီးတော့မှ ရင်ရှားထားသော ထမီအတွင်းမှ တင်းရင်းမို့မောက်ဖောင်းကားနေသော နို့အုံကြီးနှစ်မွှာတွင် အဆုံးသတ်သွား၏။ ထွန်းထွန်းက ကိုပေါစိန် အမေးကို မကြည်ရှိန်ပါ တစ်ခါတည်း သိရအောင် ဖြေလိုက်သည်။ “ မတင်ရီမကို ရွာထောင်ဘူတာ လိုက်ပို့ခိုင်းလို့ပါဗျာ..၊ ည ၁၁ နာရီ ရထားအမှီ အထည်တွေ တင်ပေးရမှာမို့တဲ့…၊ အမလေး…..သူက ရှည်ပြီး လိုက်ပို့ခိုင်းတာ..” ထွန်းထွန်း တကယ် မကျေနပ်သံကြီးနှင့် ပြောလိုက်၏။ ဘာကြောင့် မကျေမနပ် ဖြစ်နေသည်ကိုကား မကြည်ရှိန်သာ သိ၏။ မကြည်ရှိန်လည်း ည ၁၁ နာရီ စီမံကိန်းကြီး ပျက်သွားပြီမို့ ရင်ထဲဟာသွားသည်။ ထို့နောက် နှုတ်ဆက်ဖော်တောင် မရတော့..။ ထွန်းထွန်း စိတ်ထဲ မကောင်းလှစွာဖြင့်…. “ ကဲ….ကိုရီပေါစိန် ကျနော် သွားမယ်ဗျာ….” “ အေးအေး…ပံ့သကူ ဖွက်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့် လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ ကွာ…ဟား ဟား….”ကိုပေါစိန် တဟားဟား ရယ်မောရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ နေဝင်ရီတရော အချိန်မို့ တကယ်လည်း ကြောက်စရာ ကောင်းသည်။ နနွင်းနံ့လိုလို အနံ့လည်း ရ၏။ မတင်ရီမက နှာခေါင်းကို တရှုံ့ရှုံ့ လုပ်ရင်း ကြောက်ရွံ့သော အသံဖြင့်… “ မောင်….မောင်လေး… ရ…ရလား…” “ ဘာရတာလဲ မမရ…အရင်းမရှိ အဖျားမရှိနဲ့…” “ ဟို…ဟို…နနွင်း ….နနွင်းနံ့လေ….” ဟုတ်သည်…ထွန်းထွန်းလည်း ရ၏။ ထွန်းထွန်းက မကြောက်..၊ တစ္ဆေသရဲ ရှိသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ပြီးတော့ သူရထားသော တစ္ဆေသရဲနိုင် ဂါထာမန္တာန်တွေကိုလည်း ယုံကြည်၏။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမ၏ စိုက်ကားပြည့်တင်းလျက် ရှိသော ဖင်ဆုံကြီးကို ကိလေသာရောင် တလက်လက်တောက်နေသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ခါ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့လာခဲ့သည်။ “ အမလေးတော့…. သောက်ပလုတ်တုတ်…..” မတင်ရီမ တစ်ကိုယ်လုံး ထွန်းထွန်း ရင်ခွင်ထဲ ဗြုန်းကနဲ ရောက်လာသည်။ နွားတွေကလည်း လန့်ပြီး နောက်သို့လှည့်မည် အပြု..၊ ရင်ခွင်ထဲရောက်နေသော မတင်ရီမကို ယောင်ရမ်း၍ ဖက်လိုက်လေသည်။ နွေးထွေးအိစက်သော အတွေ့က ထွန်းထွန်းတစ်ကိုယ်လုံး ဖြတ်သန်းသွား၏။ အတန်ကြာသည်အထိ ဖက်ထားမိရာ… .. ” ဟွန်း….ဖက်ထားတာလဲ လွှတ်ပါအုံး…. အရိုးတွေ ကြေကုန်တော့မယ်…” ဒီတော့မှ ထွန်းထွန်းလည်း သတိဝင်ကာ လွှတ်ပေးလိုက်၏။ ရွာထောင်ဘူတာ ရောက်တော့ ည ၉ နာရီခွဲပြီ..။ ရထားလာဖို့ တစ်နာရီခွဲလောက် စောင့်ရအုံးမည်..။ လှည်းပေါ်တွင် မတင်ရီမ၏ နွေးနွေးအိအိ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း ကိုယ်လုံးကြီးကို တင်းနေအောင် ဖက်ခဲ့ရခြင်း။ မနေ့ညကလည်း မကြည်ရှိန်၏ စောက်ဖုတ်ကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ လိုးခဲ့ရခြင်း…. စသည်တို့ကြောင့် ထွန်းထွန်း စိတ်တွေမှာ ရမ္မက်လှိုင်းတွေက တမဟုတ်ချင်း ထကြွလာသည်။ သို့သော် အခြေအနေချင်းက မတူပေ။ မတင်ရီမဆိုတာက အစ်မအရင်းလို ဖြစ်နေရာ.. နည်းနည်းတော့ ဟန့်နေသည်။ လှည်းပေါ်မှာ ဖက်ခဲ့၇သည်ဆိုတာကလည်း တမင်သက်သက် ဖက်ခွင့်ရ၍မဟုတ်..။
မတင်ရီမ ကိုယ်တိုင်ကြောက်လန့်ပြီး သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဇွတ်တိုးဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတွေ ချအပြီး ခုံတန်းပေါ် ထိုင်နေကြစဉ် မတင်ရီက…. “ မောင်လေး… ဆာရင် တစ်ခုခု စားလေ…၊ မမလဲ ဘာမှ မစားခဲ့ဘူး…. ခေါက်ဆွဲကြော် စားမလား….” “ အင်း…….ကောင်းသားဘဲ…” ဘူတာအတွင်းရှိ စားသောက်ဆိုင်ဘက် ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ခေါက်ဆွဲကြော် ၂ ပွဲမှာ၍ ထိုင်နေကြစဉ်…. “ မမ……” “ ဟင်….ဘာလဲ…ပြော……” “ ကျနော်… အရက်သောက်ချင်တယ်….” “ ဘယ်ဖြစ်မလဲ… မူးကုန်မှ မပြန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေမယ်….” “ ဟာ…ရပါတယ် မမရ…မနေ့ညကတောင် သောက်သေးတာပဲ..လုပ်ပါနော်… တအားကြီး မမူးစေရပါဘူး…”“ သဘော သဘော… သိပ်တော့ မများစေနဲ့…” မတင်ရီမ သဘောမတွေ့သော မျက်နှာထားဖြင့် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မတင်ရီမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထွန်းထွန်း အရက်သောက်ဖြစ်အောင် ပရိယာယ် ဆွယ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိထားသည်။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမဆီက ငွေ ၅၀ တောင်းခဲ့ပြီး ကောင်တာဆီ ထွက်ခဲ့သည်။ အရက်ပုလင်းကြီး ထောင်ထားလျင် အမြင်မတော်သည့်အတွက် ရေဗူးထဲ ထည့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ခေါက်ဆွဲကြော်ရလျှင် လာပို့ဖို့ မှာခဲ့ပြီး ခန်းဆီးကာထားသော အခန်းလေးထဲ ဝင်ခဲ့ကြသည်။ မတင်ရီမကိုပါ ချော့တိုက်ချင်၍ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းက ဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲ အရက်ထည့်ရင်း … “ ရော့…..မမလဲ သောက်…” “ အို…ကြံကြီးစည်ရာ…မသောက်ချင်ပါဘူး….” “ ကဲ…မသောက်ချင်နေဗျာ…၊ ကျုပ်ကတော့ အပြန် သရဲ ကြောက်တယ်..၊ အရက် နဲ့ ရဲဆေးတင်ထားမှ ဖြစ်မှာ..၊ သရဲဆိုတဲ့အကောင်က သိပ်ပါးတာ.. ကြောက်တဲ့လူကို ဖြဲခြောက်တတ်တယ်..၊ မကြောက်တဲ့လူဆိုရင် အနားတောင် မကပ်ရဲဘူး…” ထွန်းထွန်းက ခွက်ထဲထည့်ထားသော အရက်ကို တစ်ခါတည်း မော့ချလိုက်သည်။ “ ဟား……..ကောင်းလိုက်တာ… ချိုမြ ၇ှိန်းဖိန်း သွားတာပဲ..” ကဲဟယ်…ဒီလောက်တောင် ရှိလှတာ… သူ့အတွက် ငှဲ့ထားသော အရက်ခွက်ကို တစ်ခါတည်း မော့သောက်ချလိုက်သည်။ ရင်ထဲပူဆင်းသွားသော်လည်း တရုတ်ဝီစကီက အဝင်မဆိုးလှပါ..။ ချိုမွှေး သင်းပျံ့သော ရနံ့လေး ရှိ၏။ “ ရော့….ထပ်ထည့်အုံး…” မတင်ရီမက အသံခပ်မာမာနှင့် ပြောသည်။ ထွန်းထွန်းက ဘာစကားမှ မပြောဘဲ ခပ်ပြုံးပြုံး မျက်နှာထားဖြင့် ထပ်ထည့်ပေးလိုက်သည်။ မတင်ရီမကလည်း စောစောကလို တရှိန်ထိုး မော့ချလိုက်ပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး နွေး ထွေးရှိန်းမြပြီး လန်းဆန်းသွားသည်။ “ကဲ… ဘယ်နှယ့်လဲ…မမ…” “ အဟင်း..ဟင်း….မဆိုးပါဘူး…. ” ယခုကဲ့သို့ မတင်ရီမကို ရှေ့ထားပြီး မိန်းမတစ်ယောက်ကို ပေါ်တင်ကြီး ဗူးထပြနေခြင်းမှာ မတင်ရီမစိတ်ကို ဆွပေးနေခြင်း ဖြစ်၏။ တရုတ်မကလည်း အအိုဖြစ်သည့်တိုင် ရူပါဖြောင့်သော ထွန်းထွန်းကို ကြာတွေပစ်နေ၏။ မတင်ရီမ ဒေါပွလာသည်။ “ အင့်……ထပ်တည့်စမ်း…” အသံခပ်မာမာဖြင့် အရက်ခွက်ကို ထွန်းထွန်း ရှေ့တိုးပေးလိုက်သည်။ “ ဟာ…ဖြစ်ပါ့မလား…မမရဲ့…” “ ဟေ့…လျှာမရှည်နဲ့ နင်နဲ့ငါ နဲ့ ညားလာတာ တစ်နှစ်တောင် ကျော်ပြီ… ဘယ်တုန်းကများ ငါ့စကား နားမထောင်ဘူးလို့လဲ…” တရုတ်မက မတင်ရီမ စကားကို သဘောကျစွာ ပြုံးကြည့်နေသည်။ ငယ်ငယ်ချောချော ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အပိုင်ယူထားနိုင်သည့်အတွက် အားကျနေပုံ ရသည်။ “ ဟုတ်သားပဲ..မောင်လေးကလဲ ကိုယ့်မိန်းမစကား နားထောင်လိုက်လေ…၊ လိုရင် ရှိသေးတယ်…”“ အဟင်းဟင်း… သနားထိုက်ပါတယ်…မမရဲ့.. မောင်လေးက လူချောလေးဘဲ.. ကဲ..လိုတာရှိရင် မှာလိုက်နော်…” စားသောက်ငွေ ရှင်းပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြ၏။ မကြာမီ ရထားဆိုက်လာသည်။ ရထားပေါ် ပစ္စည်းအပ်နှံတင်ပေးပြီးနောက် (၁၁) နာရီခွဲလောက် လှည်းနှင့် ထွက်လာခဲ့ကြသည်။ လက်ကျန်အရက်များ ထည့်ယူလာသည်ကိုတော့ မတင်ရီမ မသိ..။ ထွန်းထွန်းက သူ့အကြံနှင့် သူမို့ စကားမပြော။ ဤသို့ဖြင့် သူတို့ လှည်းသည် တိုးချဲ့ကွက်သစ်ကို ကျော်လာခဲ့သည်။ ထွန်းထွန်းက ရံတိုင်တွင် ချိတ်ထားသော လွယ်အိတ်အတွင်းမှ ဝီစကီ ပုလင်းကို ထုတ်ကာ ပါးစပ်နှင့် တေ့မော့လိုက်သည်။ “ အင့်….ငါ့မိန်းမ…ရော့… အချမ်းပြေ သောက်လိုက်….” ထွန်းထွန်း၏ မာန်ပါသော အပြောကြောင့် မတင်ရီမ မျက်နှာ ပြုံးသွားသည်။ သို့သော် နှုတ်ကမူ … “ အောင်မယ်.. ဘာငါ့မိန်းမလဲ .. ဟင်း…ပေါင်တွင်းကြော ပြတ်သွားအောင် ဆွဲလိမ်ပစ်လိုက်မယ်…” ပြောပြောဆိုဆို မတင်ရီမ လက်က ထွန်းထွန်းပေါင်ပေါ်ေ၇ာက်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမလက်ကို ဆွဲထားလိုက်ပြီး ဘယ်ဘက်လက်ထဲမှ ကြိုးများကို ဘယ်ဖက်ရံတိုင်တွင် ခပ်လျော့လျော့ ပတ်ချည်လိုက်သည်။
အသားကျပြီးသော နွားတွေမို့ အနေအထားမပျက် ပုံမှန်အတိုင်း သွား နေကြ၏။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမ ကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးဖက်လိုက်ပြီး ပါးပြင်ကို အထပ်ထပ်နမ်း၏။ သဘာဝ သနပ်ခါးနံ့ သင်းသင်းလေးက ထွန်းထွန်း၏စိတ်ကို ကြွသထက်ကြွလာအောင် မြှူဆွယ်ကလိနေသည်။ ပြည့်တင်းဖောင်းအိသော ပါးပြင်နုနုလေးကို နမ်းရသည်မှာ အရသာရှိလှသည်။ မတင်ရီမက ဒူးတုတ်လျက် အနေအထားဖြင့် အလိုက်သင့် နေလေသည်။ ထွန်းထွန်း နမ်းသမျှ ကျေနပ်စွာ ခံယူသည်။ ထွန်းထွန်းအသက်ရှူသံတွေက မြန်ဆန် ပြင်းထန်နေသည်။ ထွန်းထွန်းက နမ်းလို့အားရသောအခါ ပါးကို ဆွဲမော့လိုက်သည်။ သူ့လျှာကို မတင်ရီမ ပါးစပ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး မတင်ရီမ လျှာကို စုတ်ယူလိုက်ပြန်သည်။ မတင်ရီမက လှိုက်ဖိုမောလျှသော သက်ပြင်းအသံကြီးကို ကြားလိုက်ရသည်။ ရင်အစုံက ကော့တက်သွားပြီး ထွန်းထွန်း လီးတန်ကြီးကို တင်းနေအောင် ညှစ်ဆုတ်ထားလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းက သူ့လက်ခလယ်ကို ဟနေသော စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းကြီးထဲသို့ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး အသွင်းအနှုတ်လုပ်ကာ လှည့်ပတ်မွှေပေး၏။ “ ပြစ်…ပလစ်…ပြစ်….ပြိ…..ဗျစ်….ဖွတ်……..” မတင်ရီမက ရင်အစုံကို ကော့လျှက် ထွန်းထွန်းကတော့ လှည်းပေါ်ဖြစ်နေသည့်အတွက် လိုးကွင်းလိုးကွက်ကို ကြံဆနေ၏။ နွားတွေက ခပ်မှန်မှန် သွားနေ၍ တော်သေး၏။ ထွန်းထွန်းလက်က လှည်းကပ်ကြမ်းကို စမ်းကြည့်သည်။ အခံမပါလျှင် မတင်ရီမ နာမည်စိုး၍ ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် လှည်းပေါ်တွင် ဂုံနီအိတ်နှစ်လုံး ဆက်ခင်းထားလျှက် ရှိသည်..။ အခု မကြည်ရှိန်ကိုယ်စား မတင်ရီမကို လိုးရတော့မည်မို့ ထွန်းထွန်း စိတ်တွေ မြူးကြွလျက် ၇ှိသည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အပီအပြင် နှိုက်ဆွထားပြီး ဖြစ်ရာ ဖူးယောင်ခုံးကြွလျက် စောက်ရေတွေလည်း တစိမ့်စိမ့် ထွက်လျက် ရှိနေပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမကို နောက်လှန်ချလိုက်ပြီး ထမီကိုလှန်၍ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ပေါင်နှစ်လုံးပေါ် ကပ်ထားလိုက်သည်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ထွန်းထွန်းလုပ်ချင်ရာလုပ်တော့ ဟု စိတ်ဒုန်းဒုန်း ပုံချထားလိုက်သည်။ နွားတွေက သွားနေကျလမ်းမို့ သူ့အလိုလို တရွေ့ရွေ့ သွားနေကြသည်။ “ မမ……” “ ဟင်…….” “ ဒါလေး ငုံထားလိုက်နော်….” “ ဘာလဲ…အဲဒါက….” “ သရဲနိုင်လက်ဖွဲ့….” အမှန်က ပီယလက်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ မတင်ရီမလည်း အကြောက်ပြေ၊ စကားကြောလည်း မ၇ှည်စေရန် သရဲနိုင်လက်ဖွဲ့ဟု ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ လက်ဖွဲ့ကိုယ်စီငုံထားလိုက်ပြီး မတင်ရီမ ဖင်ကြားတည့်တည့် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်.. သူ့လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို လက်နှင့်အသေအချာကိုင်၍ စောက်ဖုတ်အဝနှင့် တေ့ချိန်ကာ မြှင်း၍မြှင်း၍ သွင်းထည့်လိုက်သည်။ လင်ယူသားမွေးဖူးခြင်း မရှိ၊ တစ်ကိုယ်တည်းနေ အပျိုကြီး စောက်ဖုတ်မို့ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး နစ်ဝင်သွား၏။ သို့သော် စောက်ရည်ကြည်တွေက စိုအိနေသဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲကြီး မဟုတ်ပါ..။ လီးတန်ကြီး၏ နူးညံ့ပူနွေး မာကျောသော အထိအတွေ့က သူမတစ်ကိုယ်လုံးရှိ ရမ္မက်သွေးတွေကို တလှိုက်လှိုက် ဆူဝေ ပွက်ထလာစေ၏။ “ မမ…ရလားဟင်….” “ အင်း…..” “ ဖွတ်….စွပ်..ဖွတ်…..ဗျစ်….ဖွတ်….အ…..အား…..အီး အင်း…အမလေး… အား..ရှီး… ကျွတ် ကျွတ်…..အမလေး တော့….” မတင်ရီမ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့သွားပြီး ခါးလည်း ကော့တက်သွား၏။
လီးဝင်လီးထွက်ကလည်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာ၏။ “ မမ…နို့ကြီးတွေ ဖော်ပေးစမ်းပါ… မောင်လေး စို့ချင်လို့…..” “ ဟင်း….တော်တော်ရှုပ်….” မတင်ရီမက ထိုသို့ပြောရင်း သူ့အပေါ်အင်္ကျီ ကြယ်သီးများကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်။ အတွင်းခံဘရာစီယာကို ဆွဲလိပ်၍ အပေါ်ပင့်လှန်လိုက်သည်။ နို့အုံတင်းတင်းအိအိကြီး နှစ်လုံးက လရောင်အောက်တွင် ဝင်းဝင်းစိုစို မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီး ပေါ်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက စောက်ဖုတ်ကြီးကို မှန်မှန်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်လိုးနေရာမှ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို တစ်ပြန်စီ စို့ပေးလိုက်၏။ “ ပြတ်…ပလပ်…..ပြွတ်……ပြွတ်…..” “ အင့်….အမေ့…အင့်….အ……..အ….ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်….အမေ့…..အင့်…အား.. ..နာတယ်… ကျွတ်ကျွတ်….အ….” နို့စို့သံ ၊ စောက်ဖုတ်နှင့် လီးထိတွေ့သံ မတင်ရီမနှုတ်က ညည်းသံတို့ဖြင့် လှည်းပေါ်မှာ ဆူညံလျှက် ရှိနေပါသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ လီးနှင့်ကင်းကွာနေခဲ့ရသော အပျိုကြီး မတင်ရီမခမျာ တစ်စစ ကောင်းလာသည်။ အီစိမ့်ရှိန်းဖိန်းသော ကာမအရသာထူးကြီးကို ထိထိမိမိကြီး ခံစားရ၏။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ရမ္မက်သွေးတွေကလည်း ပူနွေးထကြွလာသည်။ အသက်ရှူသံတွေကလည်း တစ်စတစ်စ ပြင်းထန်လာ၏။ မတင်ရီမလက်နှစ်ဖက်က ထွန်းထွန်းကျောပြင်ကြီးကို သိုင်းဖက်ထားရင်း ဖင်ဆုံကြီးကို ဆောင့်အချနှင့် အံကျ ကော့ကော့ခံသည်။ အပျိုကြီးအမည်ခံထားသော မတင်ရီမသည် လီးအတွေ့အကြုံ ၇ှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်လောက်က သူ့အဒေါ်၏ယောက်ျား ကိုဘထွားနှင့် ငြိစွန်းခဲ့ဖူးသည်။ ထိုစဉ်က ကိုဘထွားမှာ အသက် ၅၀ နီးပါး ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ တစ်ရွာလုံးက အားကိုးအားထား ပြုရသော အနှိပ်ဆရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က သူ့အဒေါ် တောသွားနေသည်။ ခါးကိုက်၍ အနှိပ်ခံမိရာမှ ကာမအကြောတွေကိုပါ ဖွင့်ပေးပြီး သူမကို လိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမနှင့် လိုးပြီးတစ်ပတ်ခန့်လောက်တွင် ကိုဘထွား ပိုးထိ၍ ဆုံးသွားသည်။ မတင်ရီမ ကြောက်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း…။ အလိုးခံရစဉ်က ကောင်းခဲ့သော အရသာတွေ လွင့်စင်သည်အထိ အကြောက်ကြီး ကြောက်ခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် လီးမှန်သမျှ ကွင်းေ၇ှာင်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အချိန်ထိ ဖြစ်သည်။ ရည်းစားရှိခဲ့ဖူးသော်လည်း နမ်းရုံဖက်ရုံ၊ နို့ကိုင်ရုံမှလွဲ၍ အလိုးမခံခဲ့ရ..။ သူ့ရည်းစားက လိုးချင်ပါသည်။ မတင်ရီမကိုယ်၌က မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှသာ လုပ်ရမည်ဟု သံမဏိစည်းကမ်းကြီး ချမှတ်ထားခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဝါကျွတ်လျှင် မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ကြိတ်ကြံထားသော်လည်း ဝါတွင်းမှာပင် သူ့၇ည်းစား တင်ညွန့် ပိုးထိ၍ဆုံးပြန်သည်။ သူ့ရည်းစား တင်ညွန့်မှာ ထွန်းထွန်းအမေ၏ မောင်အငယ်ဆုံး ဖြစ်ရာ ထွန်းထွန်း ဦးလေး ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းမမွေးခင်က ဇာတ်လမ်းများမို့ ထွန်းထွန်းကတော့ ဘာမှမသိပါ..။ အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်က ဝိုးတိုးဝါးတားမျှသာ သိခဲ့ရသော လီးအရသာကို ယခုတော့ တနင့်တပိုး တဝတအီကြီး ခံစားနေရပါတော့သည်။ “ ဖွတ်….ဖွတ်…ဖွတ်….ပလွတ်…ဖွတ်….ဖွတ်…ပလွတ်….ဖွတ်…..” “ အင့်…အမလေး… အီး အင့်… အား….အမေ့…အင့်…အမလေး…အမေ့…အင်း..အား… အ…” မတင်ရီမ လက်အစုံက ထွန်းထွန်းကျောပြင်ကြီးကို တင်းကြပ်နေအောင် ဖက်လာ၏။ ထွန်းထွန်း၏ ပြင်းထန်သော ဆောင့်ချက်တွေနဲ့အညီ ဖင်ဆုံကြောကြီးကို ရှုံ့၍ ရှုံ့၍ ကော့ကော့ခံသည်။ “ မမ….ကောင်းလား ဟင်…” “ အင့်…..အမေ့…အင့်…..ရှီး…ကောင်း….ကောင်း တယ်… အင်း…အ…ကျွတ်..ကျွတ်…” “ မောင်လေးကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား…” “ နှစ်ကယ်…နှစ်ကယ်…. ..အ…အမေ့…အ…အင့်…..” “ နောက်လဲ ခံမှာလား…ဟင်..” “ အမေ့…အင့်…ကျွတ်…ကျွတ်…ခံ…ခံမှာပေါ့ လို့…” “ မောင်လေး.. မမကို မှန်းမှန်းပြီး ဂွင်းတိုက်ရတဲ့ ညတွေ မနည်းဘူးဗျ…သိလား…” “ မမနဲ့ မောင်လေးက ဘာတော်လဲ ဟင်…” “ သိဘူး….” “ လင်မယား မဟုတ်ဘူးလား…” “ ဟင့်အင်း…ဟုတ်ဘူး… အမေ့…အား…အား…ရှီး… ကျွတ်ကျွတ်…” “ ဟို တရုတ်မကို ပြောတော့ မောင်လေးက မမယောက်ျား ဆို…” ထွန်းထွန်းက အဆောင့်လည်း မပြတ်၊ နှုတ်ကလည်း တတွတ်တွတ် မေးလျက် ရှိသည်။ တအင့်အင့် တအီးအီး ညည်းညူနေရသည့်ကြား ထွန်းထွန်းမေးသမျှကို ဖြေနေရသည်မှာ ကာမစည်းစိမ် ပျက်လှသည်။ မတင်ရီမ စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ပွင့်ကန်ပေါက်ကွဲထွက်မတတ် ကောင်းလွန်းလှသည်။ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှာလည်း တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြင့် ယားယားကြွတက်လာသည်။ နှစ်ယောက်သား အားကြိုးမာန်တက် လိုးနေကြသည်မှာ နာရီဝက်ကျော်လာပြီ။ ယခုအချိန်ထိ မည်သူမှ မပြီးကြသေး..။ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး အပြိုင်ကြဲနေကြသည်။ ထွန်းထွန်းက အားရပါးရကြီး ပစ်ပစ်ပြီး ဆောင့်လိုးနေရာမှ သူ့လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ ပြည့်တင်းနင့်နေအောင် ခံလို့ကောင်းနေစဉ် လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်လိုက်သဖြင့် မတင်ရီမရင်ထဲ ဟာထွက်သွား၏။ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း ဒေါသူပုန်ထကာ စူပွစူပွ ဖြစ်လျှက်ရှိသည်။ ထွန်းထွန်းက ပက်လက်အနေအထားမှ ကိုယ်ကို တစောင်းပြင်လိုက်၏။ ထို့နောက် မတင်ရီမ ညာဖက်ခြေထောက်ကို ကွေးလျှက် ရင်ဘတ်ဆီ တွန်းကပ်လိုက်ပြီး သူက မတင်ရီမ၏ ဘယ်ဖက်ပေါင်တံ တုတ်တုတ်ကြီးအပေါ် ခွထိုင်ကာ ခွဆုံအရင်းထိ တိုးကပ်လိုက်၏။ သူ့ညာလက်ဖြင့် နို့အုံ၊ ဘယ်လက်ဖြင့် ပခုံးကို ခပ်တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်လျက် လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲ တစ်ရစ်ချင်း ဖိသွင်းကာ ညှောင့်ညှောင့်လိုးပြန်ပါတော့သည်။ “ အီး..ဟီး…အမလေး…အမလေး…အီး ဟင်း….ကျွတ်ကျွတ်…. ကောင်း …ကောင်းလိုက်တာ မောင်…မောင်လေးရယ်… အမလေး…အမလေး…အင်း..အင့်…အား…မမကို မညှာ မညှာနဲ့…ဆောင့်..ဆောင့် ..အမေ့…အင့်…အား…နာနာ ဆောင့်…အမလေး…..ကျွတ်ကျွတ်…ဟုတ်ပြီ… ဟုတ်ပြီ…ဆောင့်…အင့်…….အ…. ” ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လှသဖြင့် မီးပွင့်မတတ် ကောင်းလွန်းလှသည်။
တစ်လှည်းလုံး လှုပ်ခါနေသည်။ အထွတ်အထိပ်ရောက်ခါနီးနေပြီမို့ ပွဲက ပိုကြမ်းလာပါသည်။ နွားတွေက ဖြေးဖြေးမှန်မှန် သွားနေရာမှ သူတို့ကို သတိပေးလေသည်ထင်၍ ဒုန်းဆိုင်း၍ ပြေးကုန်ပါတော့သည်။ “ ဒုန်း…ဒုန်း…ဒုတ်….ဒလုပ်….ကျွိ…ကျလိ….ဒုတ်………ဒုန်း….” “ အင့်…အင့်…..အင့်…အမေ့.ကျွတ်..ကျွတ်….ကဲဟာ…အ…အမေ့…ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်….” မတင်ရီမ အပေးတွေကြမ်းလာသည်။ လူသူမနီးလှသည့် လှည်းလမ်းပေါ်တွင် လှည်းသံ၊ လီးနှင့်စောက်ဖုတ် ထိတွေ့သံတို့ဖြင့် ဆူညံလျှက် ၇ှိနေပါတော့သည်။ မကြာခင်မှာပင် လှည်းပြေးနှုန်း ကျသွားသလို မတင်ရီမနှင့် ထွန်းထွန်းတို့လည်း ကာမဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝကာ ငြိမ်ကျသွားပါတော့သည်။ “ သိပ်ချစ်တာပဲ….မောင် လေး ရယ်……” ထွန်းထွန်း နှုတ်က ဘာမှမပြော..။ သို့သော် နှစ်ဆတိုး၍ ကြုံးဖက်ထားလိုက်ပါတော့သတည်း…. ပြီးပါပီ။